MX-19.3: MX Linux, DistroWatch ၏နံပါတ် ၁ Distro ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည် Linux မှ
မနေ့က, 11 2020 နိုဝင်ဘာလ အဲဒီအသည်းအသန်သူအပေါငျးတို့အဘို့ကြီးစွာသောနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည် Linuxeros သူတို့သုံးပြီးနှင့် / သို့မဟုတ်၏လမ်းကြောင်းအောက်ပါခဲ့ MX Linux, အ GNU / Linux Distro အရာအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအချိန်ကြာမြင့်စွာန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့သည် အဆင့် ၏လူသိများတဲ့က်ဘ်ဆိုက်ကနေ DistroWatch ။
La ဗားရှင်းသို့မဟုတ် update ကို «၏နာမအောက်မှာဖြန့်ချိMX-19.3»ဤထုတ်ဝေမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြေညာမည့်သာယာသောအံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်အသုံးဝင်သောသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်လာပါမည်
ပါဝင်သည်သတင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အပြည့်အဝမဝင်ခင် MX-19.3၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ (သို့) နောက်လိုက်မဟုတ်သူများအတွက်အတိုချုပ်ဖော်ပြသင့်သည် MX Linuxဆိုလိုသည်မှာ
"GNU / Linux Distro သည် antiX နှင့် MX Linux အသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြော့ရှင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Operating Systems ၏မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများသည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး anti USB မှ Live USB နှင့်လျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာများမှအစဉ်အလာအားဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်မြှင့်စွမ်းရည်များပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဖိုရမ်များမှတဆင့်များပြားသောအထောက်အပံ့များရှိသည်".
ဟုတ်ကဲ့၊ ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်ပိုမိုသိရှိလိုသည် MX Linuxငါတို့ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် နောက်ဆုံးဆက်စပ် post ချမ်းသာခြင်းအကြောင်း GNU / Linux Distroအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ထဲတွင်:
1 MX-19.3: နိုဝင်ဘာ 2021 update ကို
1.1 MX-19.3 ကဘာတွေအသစ်ယူလာတာလဲ။
1.2 MX-19.X သို့မဟုတ် MX-18.X ကိုသုံးပြီးသားဆိုလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
MX-19.3: နိုဝင်ဘာ 2021 update ကို
၎င်း၏ developer များအဆိုအရ MX-19.3 es:
"တတိယအကြိမ်မြောက် MX-19 update ကို bug fixes နှင့်မူရင်း version MX-19 မှစ၍ application update များပါဝင်သည်။ သင် MX-19 ကိုအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါက၎င်းကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ Package များအားလုံးကိုပုံမှန် update channel မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်".
el en ဘ‌‌လော့ခ် del တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကျနော်တို့အောက်ပါစာရင်းပြုစု MX-19.3 နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာအသစ်များလဲ အပါအဝင်များစွာသောအခြားထံမှ
၏စံဗားရှင်းသည် MX-19.3 (32-bit နှင့် 64-bit) မှနောက်ဆုံးပေါ် kernel ကို Debian GNU / Linuxဆိုလိုသည်မှာ kernel 4.19။ ခြားနားချက်နှင့်အတူယခု kernel သည် Debian ရင်းမြစ်များနှင့်အလိုအလျောက် update လုပ်လိမ့်မည်။ ၏ဌာနခွဲသည်သွားရမည် ISO AHS (အဆင့်မြင့် Hardware ပံ့ပိုးမှု) နှင့် ISO KDE Plasma အောက်မှာတစ် ဦး kernel 5.8ဇယား ၂၀ နှင့်အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော firmware အထုပ်။
ဗားရှင်းများနှင့် ISO များအတွက်၎င်းတွင်နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများလည်းပါဝင်သည် Debian GNU / Linux 10.6 (Buster) နှင့် MX ၏ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ရုံများ။
အဓိက application များသည်အောက်ပါ version များဖြင့်လာလိမ့်မည်။
TABLE: ISO AHS အတွက် ၁၈.၃.၆ နှင့် ၂၀.၁.၈ ။
Debian kernel: 4.19 နှင့် ISO AHS အတွက် 5.8 ။
Firefox browser - ၈၂
VLC ဗီဒီယို Player: ၃.၀.၁၁
ကလီမန်တိုင်းအသံပလေယာ - ၁.၃.၁
Thunderbird သုံးစွဲသူအီးမေးလ် - ၆၈.၁.၂.၀
Office suite: LibreOffice 6.1.5 ပေါင်းလုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများ။
သို့သော်၌တည်၏ MX repositories, ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့များစွာသောပိုပြီးပြင်ပ application ဖြစ်ပါတယ် LibreOffice 7.0 နှင့်ဇာတိ MX, မှ 19.2 ဗားရှင်းအောက်ပါများကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
MX-Package installer ကို
သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုလိုလျှင် MX-19.3 နှင့် DistroWatch အောက်ပါကိုနှိပ်ပါ link ကို.
MX-19.X သို့မဟုတ် MX-18.X ကိုသုံးပြီးသားဆိုလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်ဤထူးခြားသော၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် GNU / Linux Distroအောက်ပါလင့်ခ်ကိုဖတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောရွှေ့ပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်အောင်မြင်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအောက်ပါလင့်ခ်ကိုဖတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ MX Linux ကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်း.
သငျသညျမပါလျှင်, ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး MX Linux၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်သယ်ဆောင်သွားခြင်းမပြုရ "အရုပ်ဆိုးဘဲ" နှင့်၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံး Desktop ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး Xfceပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူ GNU / Linux Distro y Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အထက်ပါပုံတွင်သင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်နည်းတူထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုaသို့ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင်၊ တပ်ဆင်နိုင်သောနှင့်ရှင်သန်နိုင်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်း (live), အသုံးပြုရန်အတွက်စံပြ ဘောပင် drive ကို။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «MX-19.3»ရရှိနိုင်သောမူကွဲအသစ်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်း MX Linux, အ GNU / Linux Distro ကြောင်းနေဆဲအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့် အဆင့် ၏လူသိများတဲ့က်ဘ်ဆိုက်ကနေ DistroWatch; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » MX-19.3: MX Linux, DistroWatch Distro # 1 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
သီးသန့်ဆာဗာများ - သင့်အမှုကိစ္စအတွက်မည်သည့်နေရာကိုရွေးရမလဲ